Wakiilka Pogba oo markii ugu horeysay kashifay sirtii ka dambeysay ku biiriitaankii Pogba ee United | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Wakiilka Pogba oo markii ugu horeysay kashifay sirtii ka dambeysay ku biiriitaankii Pogba ee United
Wakiilka Pogba oo markii ugu horeysay kashifay sirtii ka dambeysay ku biiriitaankii Pogba ee United
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 29-08-16 10:47 AM Paul Pogba ayaa dhabarka xijiyey kooxda Real Madrid xilli uu ka door biday inuu ku biiro kooxda Manchester United sida uu xusay wakiilkiisa Mino Raiola.
23 Sanno jirkan ayaa si ba’an loola xiriirinayey inuu ku biirayo kooxda reer Spain kahor inta uusan lacag rikoor ah ugu biirin kooxda Manchester United isaga oo bishan kasoo dhaqaaqay kooxda Bianconerri Juventus.
Mino Raiola ayaa la hadlay saxaafada markii ugu horeysay tan iyo markii uu kusoo biiray Pogba kooxda Man United, Zidane ayaase shaaciyey in ciyaaryahankan ay isku dalka yihiin ay raacdo ugu jireen saxiixiisa kooxo gaarayo ilaa lix kooxood.
Si kastaba ha ahaatee, Wakiilka Pogba ayaa ka dhawaajiyey inuu ciyaaryahankan maanka ku hayey inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Man United tan iyo marka uu soo idlaaday koobka Euro 2016 ka, Pogba ayaa isaga soo hayaamay United sanadkii 2012 ka xilligaas oo uu si bilaash ah ugu biiray kooxda Juventus.
“Wax wadahadal ah maanan yeelan intii uu socday koobkii Euro aha, waxa uu ka niyad jabay guuldarradii soo gaartay xulkiisa ciyaartii kama dambeysta” Mino Raiola ayaa sidaas u sheegay Telefoot.
“Si cad ayuu iigu sheegay waxa uu doonayo, Manchester United ayaa aheyd koox uu had iyo goor doonayo inuu ku biiro, wax waliba oo ila gudboonaaday waxaan u sheegay intii aan ku sugneyn Miami”.
“Zidane ayaa sidoo kale kamid ahaa dhowr ka macalin ee daneynayey saxiixa xidigan, Manchester ayaa ah hada koox xoogan maadaama ay la wareegeen Paul Pogba”.
ugu dambeyn wakiilka xidigan ayaa ka dhawaajiyey in macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho uu horey isugu dayey inuu la saxiixdo Paul Pogba waa xilligii uu ku sugnaa kooxda Chelsea.